Spartan Pro Antivirus oo Bilaash ah Waqti Xaddidan | Waxaan ka socdaa mac
Mar labaad waxaan ka hadlaynaa codsi aan si buuxda oo bilaash ah uga soo dejisan karno wakhti xaddidan. Markan waxaan ka hadlaynaa Antivirus Spartan Pro, oo ah barnaamij noo saamaxaya inaan ogaano oo aan tirtirno Adware, malware iyo sidoo kale virus. In muddo ah hadda, waxay umuuqataa in ujeedada ugu weyn ee asxaabta dadka kale ay tahay OS X oo cadeyn tan u ah waxaan haynaa labadii khaldanaa ee ugu dambeeyay waxay gaareen nidaamka hawlgalka Mac ee gacanta gudbinta, Codsiga laga soo dejinayo durdurrada kombiyuutarkayaga.
Marka la eego halista sii kordheysa ee OS X wajaheysa, codsiyo cusub ayaa soo baxa mar kasta oo noo ogolaanaya inaan falanqeyno oo aan raad raacno fayl kasta oo aan nuqul ka sameysanno ama ka soo dejisanno Mac-keena. markasta hadday tahay mid ka mid ah soo degsashada ama faylasha aan nuqul ka samayno waxaa kugu dhacay nooc ka mid ah furin, spyware, ama si fudud virus.
Spartan Pro Antivirus waxay noo ogolaaneysaa inaan hubino Mac-keena si aan u raadino noocan noocan ah software-ka xun ee nagu ridi kara meel adag oo aan aakhirka ku soo dhuuman. Laakiin nooma oggolaanayso inaan ogaanno oo aan baabi'inno khatar kasta oo noocan ah, laakiin sidoo kale waxay noo oggolaanaysaa inaan maamulno iyo kormeer ku xirnaansheena internetka markasta iyadoo la raadinayo cid kasta oo loo hanjabo.
Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay sidoo kale na siineysaa biraawsar xannibya nooc kasta oo xayeysiis ah iyo daaqadaha pop-up, kuwa daaqadaha faraxsan ee si isdaba joog ah u furma had iyo jeerna nagu dhiirrigeliya inaan soo dejino softiweer ay ku dhexjiraan barnaamijyo xunxun shaki la'aan. Sidoo kale wakhti xaddidan waan awoodnaa soo dejiso codsigan oo sida caadiga ah leh qiimo dhan 29,99 euro oo ku yaal Mac App Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Spartan Pro Antivirus Waa Bilaash Waqti Xaddidan
Aniga ahaan waa been, ma aqaano nidaam deggan, sida OS X. Waxay isticmaalaan tufaaxa.
Jawaab Oscar Ortega
Ka dib markii aan rakibay antivirus-kan, waxaan ku falanqeeyay Malwarebytes waxaanan helay Malware, markaa anigu shaqsiyan kuma talin karo.
Jawaab Guillermo Lara
Waa inaysan laheyn wax furin ah maadaama laga heli karo Mac App Store. Barnaamijyo badan oo noocan ah waxay qabtaan tartamayaasha ay ka midka yihiin malware, spyware iyo kuwa kale, laakiin maahan oo keliya Mac laakiin Windows sidoo kale.
Waa laga waayey kaydkii barnaamijka. Waxaan ku soo degsaday bilaash waxaanan isku dayay dhowr jeer oo isku xigta, aniga oo aan wax ka badalin ama aan baarin iyo mar kasta oo aan helo faylal cudurka qaba. hadda waxaan ku hayaa 'karantiil' Waxaan isticmaalayay Virus Barrier Express muddo dheer oo mararka qaarkood nadiifiya faylasha 'pigot'? (qaar sida muuqata u horseedaya xayeysiinta yahoo)
Ku jawaab fanal
Qalabka wax soo saarka ee Apple Watch Edition wuu kala duwanaan karaa sannad kasta